Record Fizahan-tany any Hawaii no mahazatra tsy ampoizina vaovao: Aza milaza amin'iza!
Home » Hawaii Travel News » Record Fizahan-tany any Hawaii no mahazatra tsy ampoizina vaovao: Aza milaza amin'iza!
Aorian'ny fahanginana herintaona dia hamaly ny fanontaniana amin'ny antso ho an'ny World Tour Network Zoom ho avy ny manampahefana fizahan-tany amin'ny 7 aprily amin'ny XNUMX aprily. Asaina ny vahoaka handray anjara sy hametraka fanontaniana. Ahoana no namerenenan'i Hawaii mangingina mpitsidika marobe?
Miroborobo indray ny fizahantany any Waikiki. Ny Fetin'ny Paska tamin'ity taona ity dia nahita mpitsangatsangana tao Waikiki.
Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany an-trano an-tsoratra, hotely sy seranam-piaramanidina dia mitazona io fahombiazana io ho an'ny indostrian'ny mpitsidika Hawaii ho tsiambaratelo iray an'ny fanjakana.
Efa mipetraka ny fifandanjan'ny aretina sy vaksinin'ny COVID-19. Ny lakile dia ny hitazomana azy io hametraka an'i Hawaii ho toerana voalohany eto an-tany manana ny "zava-drehetra ara-dalàna."
Manakaiky ny 20,000 isan'alina ny fahatongavan'i Etazonia Tanindrazana amerikana isan'andro, mialoha ny fahazoan-dàlana ho an'ny seranam-piaramanidina maro, mba hahafahan'ny mpandeha mankany amoron-dranomasina amin'ny minitra ahatongavany, i Hawaii dia mampiseho an'izao tontolo izao ny fomba ahafahan'ny fizahan-tany miverina ara-dalàna ao amin'ny Aloha Fanjakana - na dia tsy misy mpitsidika iraisam-pirenena aza.
Waikiki amin'ny Alahadin'ny Paska
Toa tadiavin'ireo hotely sy seranam-piaramanidina ny tsy hahalalana izany lazany izany ary “fa tsy fanehoan-kevitra”, noho ny politikan'ny orinasa
Toa vao mainka betsaka aza ny mpitsidika ao an-toerana no tototry ny morontsiraka raha oharina amin'ny ora mahazatra.
Mazava ho azy izay tsy hita dia ny Kanadiana, ny Japoney, Koreana, Sinoa, Aostraliana, Nouvelle Zélande, Malezia, Singapore, Eoropeana. Zara raha misy vahiny, fa ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana sahirana, ny fivarotana dia tsy mahazaka ny fangatahana fizahan-tany vaovao.
Raha manokatra ny sisin-tany i Etazonia, manambatra ny fitomboan'ny fahafaha-manao ao an-trano amin'ny sidina vaovao, tsena anatiny vaovao, hiverina hiverina amin'ny laoniny ny fizahan-tany Hawaii na amin'ny fotoana fohy. Vaovao mahafaly ve izany, sa vaovao mampatahotra?
Ahoana ny amin'ny fanalavirana ny fiaraha-monina? Aza adino ny manalavitra ny fiaraha-monina eo amoron-dranomasina. Tsy misy mangataka, tsy misy manery. Ao anaty trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, ivon-toeram-pivarotana dia misy ny politika mifehy ny sarontava. Ny magazay sasany ao anatin'izany ny Apple Computer dia mbola manana politika hentitra ihany mba hamelana ny mpanjifa hanana fotoana voatondro.
Toa tsy hitovizany mihitsy izany amin'ny ankamaroan'ny fivarotana, trano fisakafoanana na toerana fialamboly hafa.
Tsy latsaky ny iray minitra ny mpampiandry ao amin'ny "Cheese Cake Factory" malaza hanadio sy hanadio ny latabatra fisakafoanana eo anelanelan'ny vahiny.
Ny fitsipiky ny fahadiovana dia azo antoka fa tsy amin'ny fomba ilaina amin'ny trano fisakafoanana lehibe toa ny orinasa Cheese Cake, raha ny trano fisakafoanana maro kosa dia manome lanja betsaka ny hitazomana ny fananganana azy ireo ho madio sy azo antoka. Henoy ny mpitantana ao amin'ny Waikiki Cheesecake Factory izay nilaza tamin'ny vahiny iray hiantso ny "Corporate" mba hahazo fanazavana ny antony.
Ny ankamaroan'ny toerana eto amin'izao tontolo izao dia efa nanaiky fa tsy hiverina amin'ny laoniny intsony ny fizahantany. Fahita tsy fahita eto amin'izao tontolo izao ve i Hawaii?
Ny aretina COVID-19 any Hawaii dia mbola ambany indrindra raha oharina amin'ireo Etazonia amerikana hafa saingy nihanika kely vao tsy ela akory izay. Tena mahomby amin'ny fanaovana vaksinina i Hawaii. Toa fihetsika mandanjalanja eo amin'ny aretina sy ny vaksinina io. Angamba any Hawaii, ny vaksininy sy ny fizahan-tany no mahazo ny mpandresy amin'ity indray mitoraka ity.
Miaraka amin'ny toekarena mikatso, ny tsy fananan'asa avo, ity dia fampandrosoana mandroso tokoa ho an'ny Aloha Fanjakana.
Ny Fahefana fizahan-tany any Hawaii, masoivohom-panjakana miadidy ny fizahan-tany dia nangina nandritra ny krizy.
Amin'ny Alarobia 7 aprily Pattie V. Herman, VP Marketing & Fampivoarana ny vokatra Hawaii fizahan-tany fizahan-tany dia ho vahinin'ny a Fifanakalozan-kevitra momba ny fizahantany manerantany hanome antsipiriany bebe kokoa sy hamaly fanontaniana. eTurboNews ny mpamaky dia asaina hisoratra anarana sy handray anjara. Mandeha https://worldtourismevents.com/event/is-hawaii-tourism-back/ ary ataovy ao anatin'ity resaka ity.
Ny mpandeha TAP Air Portugal dia azo andrana ao amin'ny seranam-piaramanidina Lisbonne izao
Resadresaka fanatanterahana: Ny fahasalaman'ny fiaramanidina Australia